အချစ်တဲ့…အော် တယ်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့ နေရာယူတတ်တဲ့ ကောင်ပဲ။ အချစ်မင်းဘာကြောင့် လူတွေကို ဒုက္ခပေးချင်ရတာလဲ။ ဘာကြောင့် `မင်း´က ငါတို့လို လူတွေကို စိုးမိုးနိုင်ရတာလဲ။ `ငါ´ စဉ်းစားတယ်။ တွေးကြည့်တယ်။ မေးကြည့်တယ်။ လိုက်စူးစမ်းကြည့်တယ်။ ရှာဖွေကြည့်တယ်။ တူးဖော်ကြည့် တယ်။ ဟော…တွေ့ပါပြီ။ အား…ပူလိုက်တာဗျာ။ တော်တော်ကို ပူတဲ့ကောင်ပဲ။ လျှပ်စစ်ကွိုင်မီးဖိုထဲက သံစပရိန်ကွိုင် မီးပူပူကို ကိုင်ရင် တောင် ပူရင်ခဏဆိုပြီးသွားမှာ။ ဒီကောင်ကျမှ တမြေ့မြေ့တရေးရေးနဲ့ကို ပူတာဗျ။ ဒီကောင်က တစ်ယောက် တည်းလားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်ဘူးဗျ။ သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ သူ့ရဲ့ဖွား ဖက်တော်တွေဖြစ်တဲ့ `အမုန်း´၊ `အလွမ်း´ခံစားမှုပေါင်းစုံက သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေလေ။ သူ့ သူငယ်ချင်း တွေကလည်း သူ့ကို သိပ်ချစ်ကြတယ်။ ဒီကောင်က လူတစ်ယောက်ကို ချဉ်းကပ်တော့မယ်ဆိုရင် သူ့ သူငယ် ချင်းတွေကိုပါ ခေါ်လာသေးတာ။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အကွက်ကျကျ အကွက်ချထားသလို တာဝန်ကျေကြတာ။ သူ့ နေရာနဲ့ သူလိုက်လို့ ဖက်လို့ပါပဲ။
အချစ်ဆိုတဲ့ကောင် ဒီကောင်ကို လက်ကမ်းကြိုဆိုမိလို့ကတော့ ငါတော့သေပြီလို့သာမှတ်။ ဘာကြောင့် လဲဆိုတော့ သူ့အပြင် သူ့နောက်မှာ အပေါင်းအပါတွေကပါ တစ်လေ့ကြီးလိုက်တာကြတာလေ။ `မင်း´မမြင် ဘူးမလား၊ သူငယ်ချင်း။ ကိုယ့်လူရေ သေချာကြည့် မြင်အောင်ကြည့် မင်းမြင်ရမယ်ထင်လား။ မှားသွားမယ်။ စိတ်မောသွားမယ်။ ရူးသွားမယ်။ လိုက်ရှာမနေနဲ့ ပင်ပန်းသွားမယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင်ကွာ `မင်း´ စုတ်ပြတ်သပ် သွားမယ်။ ဒီတိုင်းထားလိုက် တစ်ချိန်မင်းမတွေ့ချင်၊ မမြင်ချင်၊ မလိုချင်ရင်လည်း မင်းသေလောက်အောင် ခေါင်းခါနေလည်း အဲဒီအချိန်မှာ နောက်ကျသွားပြီကွ။ အဲဒီအခါကျမှ မင်းမြင်မရ၊ တွေ့ရ၊ ခံစားရမှာ။ ဒီတော့မှ အား…ကနဲအော်ပြီးထွက်မပြေးနဲ့ `မင်း´ဘယ်လောင်ပြေးပြေး၊ သူက `မင်း´ထက်အားကောင်းတယ်။ အမော ခံတယ်။ သန်မာတယ်။ အပြေးသန်တယ်ကွ။ ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် မင်းရှေ့မှာ အဲဒီအကောင်က ရောက်နေမှာ မင်းမှတ်ထား။
`ဟေ့ကောင်´`မင်း´ကအချစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါ့ကိုကျတော့ပြောတယ်။ `မင်း´ရော မစဉ်းစားဖူးလား။ မတွေးကြည့်ဖူးလား။ မမေးကြည့်ဖူးလား။ လိုက်မစူးစမ်းဖူးလား။ မရှာဖွေကြည့်ဖူးလား။ `မင်း´ရောမတွေ့လို့ လား၊ ပြော `ဟေ့ကောင်´။
ပြန်လာခဲ့နှလုံးသားက မင်းအတွက်ဆို မျှော်နေဦးမယ်
In: ဝတ္ထု Posted By: lwanpaishin Date: Apr 28, 2012
Leave comment 1 Comment & 235 views
super like the whole story.
it’s also my favourite song that i’ve got from my beloved one. 😛
By: ei lay at May 13, 2012